पोखरामा बम विस्फोट, पत्रकार पाण्डे र प्रहरी घाईते | Jukson
पोखरामा बम विस्फोट, पत्रकार पाण्डे र प्रहरी घाईते
फागुन ८ , पोखरा ।
पोखराको बिजयपुर खोलामा टाईम बम विष्फोट भएको छ । विष्फोटको छर्रा लागी पत्रकार घनश्याम पाण्डे र प्रहरी कुलबहादुर खत्री घाइते भएका छन् ।
उनीहरुको गण्डकी मेडिकल कलेजमा उपचार भईरहेको छ । पत्रकार पाण्डे रेडियो गण्डकी र गण्डकी टेलिभिजनमा कार्यरत छन् ।
विप्लव माओवादीले आह्वान गरेको बन्दका क्रममा नागढुंगा र विजयपुरमा शंकास्पद वस्तु भेटिएको थियो । नागढुंगामा नेपाली सेनाको बम डिस्पोजल टोली पुगे पनि विजयपुरमा केही समय लागेको थियो । त्यही क्रममा वम विष्फोट भएको हो ।
शंकास्पद बस्तु भनेर रिपोर्टिङ गर्न पुगेका पाण्डेको टाउको र घाँटीमा चोट लागेको छ ।
कास्की प्रहरी प्रमुख एसपी अशोक सिंहले पत्रकार र प्रहरी घाईते भएको बताएका छन् । ‘दुई जना घाईते भएको थाहा हुन आएको छ । संकास्पद वस्तु देखिएको जानकारी आउने बित्तिकै हामी पुग्यौं । पहिल्यै विस्फोट भयो । पोखरामा नागढुंगा र विजयपुर बाहेक अन्यत्र यस्ता वस्तु भेटिएको थाहा हुन आएको छैन।’ सिंहले भने ।
यतिबेला प्रहरी र आर्मीको टोली बिजयपुर खोला पुगेको छ ।
न्युज स्रोत : गण्डक न्युज
डा. गोविन्द केसी कै तीन जन्ममिति ! स्वीकारे गल्ती
छोरीसँग लडेर एक अर्बको सम्पत्ति दान
आफुलाई लागेको झुटो आरोपको खण्डन गर्न धुर्मुस सुन्तली फाउन्डेसनले पत्रकार सम्मेलन गरे
कोसेलीको निम्त्याएको मृत्युदण्ड
कार्तिकमा नेपाली फिल्मको ठूलो भिडन्त
विश्वका ९ चर्चित हतियार
बगरमा खुल्यो ‘दि जाइन्ट फिटनेस एण्ड हेल्थ क्लब’